LifeBogger နေဖြင့်အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Croatian ဘောလုံးကစားသမားများ အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသည်သူအပြည့်အဝပုံပြင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ Genius တင်ဆက်; "ကြက်"။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုနောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, သူ့ကိုအကြောင်းကို (နည်းနည်းလူသိများ) များစွာသောအခြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းတောင်ပံကစားသမားသို့မဟုတ်ဒုတိယတိုက်စစ်မှုးအဖြစ်သူ၏ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် display တွေအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောအိုင်ဗင် Perisic ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
အိုင်ဗင် Perisic အဆိုပါ2ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်nd သူ့အမိကား, Tihana Perišićနှင့်ဖခင်အောက်ဖော်ပြပါများမှ Perisic အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 1989 ၏နေ့ Split ကို, ခရိုအေးရှား.
အိုင်ဗင် Perisic တစ်ဦးလယ်ယာစိုက်ပျိုးမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ အတူတူသူ့မိဘနှင့်အတူအိုင်ဗင်ကသူ့တဦးတည်းနှင့်သာနှမ, Anita Perisic နှင့်အတူကြီးပြင်းလာတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကာလအတွင်း, သူ့မိတ်ဆွေများကသူ့ကိုခေါ်လေ့ရှိတယ် Koka အရာစာသားနည်းလမ်းများ "သို့" သူ၏ဇာတိဘာသာစကားမှာ။ အဆိုပါ "ကြက်"အမည်ပြောင်ငယ်ရွယ်အိုင်ဗင်ကိုအမြဲမိမိအဘ၏အပေါ်အထဲကကူညီပေးနေမြင်ရ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့သည် လာ. , သို့ ခရိုအရှေကမ်းခြေပေါ်ရုံ Omis သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့အပြင်ဘက်ကြက်ခြံ။
hens ပွုစုပြိုးထောအောက်ဖော်ပြပါများမှ (အိုင်ဗင်ရဲ့အဖေ) နှင့်သူ၏မိသားစုများအတွက်ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမည်ပြောင် "ဟုခေါ်ခံရပေမယ့်လည်းကြက်သူသည်မိမိအဘ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်အဖြစ် "အိုင်ဗင်အများကြီးဂရုစိုက်ဘူး။
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ဘောလုံးပွဲမတ်ေတာသ & အနစ်နာခံ
အဆိုပါကြက်ခြံမှာသူ့မိဘကူညီပေးနေဘေးဖယ်, ငယ်ရွယ်အိုင်ဗင်အစောပိုင်းအပေါ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာအခွက်တဆယ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူဟာဘောလုံးကစားရန်သူ၏အားလပ်ချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဂိမ်းသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုဒေသခံတစ်ဦးအဖွဲ့သည်အတူစာရင်းသွင်းမွငျလြှငျ, Hajduk Split ကို အဘယ်သူသည်သူ့ကိုသူ၏အခွက်တဆယ်တခုအဖြစ်ဖို့ဇာတ်စင်ကိုပေး၏။
အလွန်လေးနက်နှင့်နောက်လာမည့်အဆင့်အထိသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယူအိုင်ဗင်ရဲ့ရှာပုံတော်အဆိုပါ Perisic မိသားစုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာနှင့်အတူမြို့သို့ရောက်လေ၏။ သူ့မိဘကသူ၏အကယ်ဒမီအခကြေးငွေမတတ်နိုင်ပါဘူး။ Moni ဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူလာ ကြီးမြတ်သောယဇ်ပူဇော်ပွဲကို နာကျင်စွာသူ့သားရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတောင်းဆိုချက်များကိုဂရုစိုက်ရန်သူ၏ကြက်ခြံစတော့ရှယ်ယာရောင်းဖို့သူကသူ့အဖေပါ။
အိုင်ဗင်ရဲ့အဖေ, အောက်ဖော်ပြပါများမှ Perisic ကသူရှိပါတယ်တိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုတက်ပေးခြင်းကိုဆိုလိုသည်လျှင်ပင်မိမိသားအဘို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်သောသူသူဖြစ်၏။ အောက်ဖော်ပြပါများမှခရိုအေးရှားအတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးအကယ်ဒမီမှမိမိသားကိုပေးပို့ဖို့ Moni မြှင့်ရန်လေလံ၌သူ၏ကြက်ပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချခဲ့သည်။
သူ့မိသားစုကဖွင့်မရနဲ့အပြေးတစ်ဦးလေလံမှာတော့အောက်ဖော်ပြပါများမှ (နောက်ပိုင်းဒုက္ခသူ့ကိုရတယ်ထားတဲ့အကြွေးပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူခဲ့အိုင်ဗင် Perisic မိသားစုအချက်အလက်အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှင်းပြခဲ့) ။ ဆန့်ကျင် Perisic လမ်းတိုင်းခြေလှမ်းအတွက်မိမိသားအဘို့ရှိ၏။
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှဗိုလ်လုပွဲအနစ်နာခံခြင်းနှင့်ထ
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကအစောပိုင်းအပေါ်အိုင်ဗင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်သင်တန်းသတ်မှတ်ထားသောမိသားစုကြက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အိုင်ဗင်သည်သူ၏ဘောလုံးကစားခြင်းနှင့်ကျောင်းသွား, Hajduk မှာခြောက်လအစိုင်အခဲအနှစ်နေခဲ့ရသည်။ မိမိအကြက်ငှက်ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူမှုများမှသူ၏ကလဝကနှင့်အတူရုန်းကန်နေသော်လည်းအိုင်ဗင်ရဲ့အမြော်အမြင်အဖေအခြားငွေချေးယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်, ချေးငွေ Moni ကသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပိုကြီးအခွင့်အလမ်းများကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်ပြင်သစ်မိမိသားကိုပေးပို့ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်အဖြစ်, အိုင်ဗင် Sochaux Jean-Pierre ၏ Peugeot သည် Peugeot မိသားစုဝင်တစ်ဦးထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကတည်ထောင်ပြင်သစ်ကလပ်အားဖြင့်စမ်းသပ်မှုတွေတက်သည်ကိုခေါ်ခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်အိုင်ဗင်အဘို့, ပြင်သစ်သွား၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းရတဲ့လွတ်လပ်သောနေဖို့နဲ့သူ့အဘ၏ကြီးမားသောအကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့ Moni ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ asides ။
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, ဒီ Moni အများကြီးအားမိမိအပြောင်းအရွေ့သို့ pumped ခဲ့သည် Sochaux ။ ဒီအပြောင်းအရွေ့အတွက် 2006 / 2007 ရာသီအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာကသူ့ကိုအဘို့, အိုင်ဗင်အဖြစ်မကြာမီသူသည်အသင်းအတွက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဂိမ်းကစားအဖြစ်မှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဲဒီနွေရာသီ, 2006 အတွက်, ပြင်သစ်သတင်းစာများတစ်ဦးအကြောင်းကိုရေးသားစတင်ခဲ့သည် curly ဆံပင်ကလေးငယ်များအတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ လူအစုအဝေးအထင်ကြီး၏ဝါသနာတဲ့သူဖြစ်ခဲ့သည်။
အိုင်ဗင်ရဲ့အထင်ကြီးစွမ်းဆောင်ရည်သူပိုမြန်ကြီးထွားမယ်လို့ယုံကြည်သည်ဘယ်မှာဘယ်လ်ဂျီယံအားမိမိပြောင်းရွှေ့ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အိုင်ဗင်ကသူနောက်ဆုံးတော့ကိုယ်အဘို့နာမည်တစ်ခုကိုဖန်ဆင်းရှိရာကလပ် Brugge ပြောင်းရွှေ့မတိုင်မီ Roeselare မှာချေးငွေနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံကလပ်နှင့်အတူအိုင်ဗင်အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံ Pro ကိုလိဂ်ထိပ်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းနှင့် 2011 များအတွက်တစ်နှစ်တာ၏ဘယ်လ်ဂျီယံအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤသည် feat သူ့ကိုရန်ပြောင်းရွှေ့ရရှိခဲ့ ဒေါ့မွန် သူ 2011-12 ဘွန်ဒစ်လီဂါအနိုင်ရရှိရာ။ ဤအချိန်တွင်သူသည်နောက်တဖန်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည် curly ဆံပင်ကောင်လေးဒါပေမယ့်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်သေစေနိုင်သောဘောလုံးသမားအတောင်နှင့်ရည်မှန်းချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌။ VfL Wolfsburg နှင့်အင်တာမီလန်မီလန်အားမိမိခရီးနောက်တစ်နေ့နှင့်ကြွင်းသောအရာနောက်တော်သို့လိုက်, သူတို့ကပြောပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
တိုင်းအောင်မြင်သော-Croatian ဘောလုံးသမားခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဖျားခါ, ရည်းစားနှင့်ဇနီးလည်းရှိ၏။ အိုင်ဗင် Perisic အထက်တန်းကျောင်းရှိသူ၏ကလေးဘဝရည်းစား, Josipa တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကနှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများအတန်းထဲတွင်အတူတူကျောင်းကခုံတန်းရှည်ဝေမျှသူကိုအတန်းဖော်ခဲ့ကြသည်။
အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အိုင်ဗင်နှင့် Josipa ဒေါ့မွန်နဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ကာလအတွင်း 2012 အတွက်လက်ထပ်တယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကတည်းကပျော်ရွှင်စုံတွဲများခဲ့ပါတယ်။
အတူတူ, နှစ်ဦးစလုံးစုံတွဲများမန်နူလာအမည်ရှိအမည်ရှိသမီးနှင့်သူ့အစ်မထက်သုံးနှစ်ကအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်သူတစ်ဦး၏သား, လီယိုနာဒိုရှိသည်။ လီယိုနာဒို Perisic Wolfsburg မွေးဖွားခဲ့သည်နှင့်သားတော်ပေးပါ့မယ်သူ့ကိုကဲ့သို့သောဘောလုံးသမားဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောသူသည်မိမိအဘနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်အားကောင်းတဲ့နှောင်ကြိုးရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဤအချိန်ကသူနဲ့တူမဆိုဘဏ္ဍာရေးရုန်းကန်မှုများမရှိဘဲသူ့မိသားစုနှင့်အတူတွေ့ကြုံ။
အိုင်ဗင် Perisic သူ၏မိသားစုမှလုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည်။ သူကသိပ်လူသိရှင်ကြားကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူးယျတျောသညျ, အိုင်ဗင်တစ်ချိန်ကဆွစ်ဇာလန်ရှိ Lake Lugano ၏လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်များ၏ရှေ့မှောက်၌သူ့မိသားစုနှင့်အတူပုံကိုယူ။
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုအချက်အလက်
အိုင်ဗင် Perisic ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလုပ် Moni သူ၏မိသားစုမှအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည်မိမိအမိကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ယူအစ်မနဲ့သူကျန်ရစ်သူသူ့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်မယ့်လေလံအတွက်ချေးငွေအပေါ်ဝယ်စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းကိရိယာထဲကနေမိမိအဘ၏ကြွေးမြီအခြေချခဲ့သည်။
တဦးတည်းအရင်းအမြစ်အခိုင်အမာအဖြစ်, ဆန့်ကျင်ချေးငွေအပေါ်ဝယ်စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းကိရိယာအချိန်ပေါ် paid မခံခဲ့ရနှင့်ဤတကယ် Perisic မိသားစုကြောက်ရတယ်ထားတဲ့ဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲများမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အိုင်ဗင်အကြွေးတိုင်းတစ်ခုတည်းတစ်ပြားမှပေးဆောင်အဖြစ်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်သို့ရောက်ကြ၏။
အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်
အိုင်ဗင် Perisic တစ်ချိန်ကအတူထွက်ကျဆင်း Jurgen Klopp ဒေါ့မွန်မှာအချိန်ကစားခြင်း၏မရှိခြင်းကျော်။ Klopp အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံကိုအမြဲ Perisic ရဲ့ rants မှာစကားစောင့်ရှောက်တစ်ချိန်က "အဖြစ်သူ့ကို brandedသူငယ်နှင့်တူသောသူ့အပြုအမူတွေကြောင့်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အိုင်ဗန်ပါရစ်ဟာခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်ရတာမကြိုက်ဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးတဲ့အခါသူက…
ဂိမ်းကစားခြင်းမငါ့အဘို့ပြစ်ဒဏ်ကဲ့သို့ခံစားရ "ငါသည်ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်သောအခါ, ငါသေဆုံးတယ်" ။ ငါခက်ခဲလမ်းကအကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြရသည်။ ငါ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ရန်ရှိသည်
အိုင်ဗင် Perisic ဂျူဗင်တပ်စ်ပေးဆောင်ဖို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာအမျက်ထွက်၏ဖြစ်ရပ်တွင်တွေ့မြင်သကဲ့သို့, သူလည်ပင်းနှင့်မေးရိုးအားဖြင့်သူ့ပြိုင်ဘက်တိုးလာတယ် Juan Cuadrado နှင့် Alvaro Morata.
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုင်ဗင် Perisic ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
Andrej Kramaric ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Mateo Kovacic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Dejan Lovren ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အိုင်ဗင် Rakitic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
လောနိတျမွို့မိုဒရစ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်